ကမ္ဘာ့ ကာကွယ်ရေး ကွန်ယက် မှာ ထိပ် ဆုံး ကို တက်လာေ န တဲ့ တရုတ် ရဲ့ A2/AD – Thadin Media
ကမ္ဘာ့ ကာကွယ်ရေး ကွန်ယက် မှာ ထိပ် ဆုံး ကို တက်လာေ န တဲ့ တရုတ် ရဲ့ A2/AD
March 12, 2018 aInternational News
ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ရေးကွန်ယက်မှာ ထိပ်ဆုံးကိုတက်လာနေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ A2/AD
အာရှ-ပစိဖိတ်အရေးစောင့်ကြည့်သူတိုင်းရဲ့ပြောစမှတ်တွင်လောက်တဲ့ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ရမယ့် ခေတ်မီကာကွယ်ရေးအစီအမံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ anti-access/area-denial (A2/AD) ပင်ဖြစ်သည် ။
A2/AD ဆိုတာဟာ တရုတ်ရဲ့အခြေစိုက်စစ်စခန်းတွေကို ရန်သူရဲ့ဝိုင်းပတ်လာမှုတွေကနေ ထိန်းချုပ်မှုပြည့်ဝစွာနဲ့ကွပ်ကဲပြီး တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မယ့်စနစ်ဖြစ်သည် ။
ပထမဆင့်မှာ ရန်သူ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန့်တားမယ် ဒုတိယအဆင့်မှာ အမေရိကန်ရှိပစ်မှတ်များ သို့မဟုတ် ပစဖိတ်အတွင်းရှိပစ်မှတ်များကို တန်ပြန်ချေမှုန်းပစ်မှာဖြစ်သည် ။
ထို့ပြင် A2/AD စနစ်ကြီးနဲ့အတူ maritime နဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့ကဲ့သို့နေရာတွေကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်မည်လည်းဖြစ်သည် ။
တရုတ်သည် ထိုးစစ်ထက် ခံစစ်မဟာဗျူဟာကိုပုံဖော်လာနေသည် ။
အကောင်းဆုံးခံစစ်သည် အကောင်းဆုံးထိုးစစ်ဖြစ်သည် ဆိုသည့်ဝါဒကိုလက်ကိုင်ထားပြီး အခွင့်သာတာနဲ့ Counter ပြန်လုပ်နိုင်မည့် အခြေအနေကိုဖန်တီးထားသည် ။
တရုတ်၏ A2/AD ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မည့် SEAD လုပ်ငန်းစဉ်မှာပင် တစ်ဖက်မှအဆုံးအရှုံးကြီးစွာနှင့်ပြန်ထွက်သွားရအောင်ထိ အကြံကြီးသည် ။
A2/AD တွင် intelligence , surveillance and reconnaissance (ISR) ဆိုပြီးနက်ဝေါ့ခ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားသည် ။
ISR တွင် Targeting , Communications, Naval ,
Air , Missile defense, Cyber attack စသည့်အပိုင်းများထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည် ။
Tracking ပိုင်းနှင့် C4ISR ပိုင်းအတွက် အာကာသကိုအခြေခံပြီး ရေမိုင် ၈သိန်း၇သောင်းကျော်ကို စောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်သည် ။
တစ်ဖက်ရန်သူဟာ တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တရုတ်ကမ်းခြေအတော်များများဟာ အရပ်ဖက်ရေယာဉ်အများဆုံးကမ်းခြေတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်လို့ ပစ်မှတ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ် ။
တရုတ်အနေနဲ့ ၎င်းရဲ့အရပ်ဖက်သင်္ဘောတွေကိုစစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးစနစ်များတပ်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖူးပါတယ် ။
target locating data and fusion အတွက် တရုတ်ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်တုတွေဆီကနေ positioning, navigation and timing (PNT) စတာတွေကို အကူအညီယူမှာပါ ။
ဒီအတွက် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ထိမှာ တရုတ်ဟာ ဂြိုလ်တု ၁၀ ခုအထိလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အခုလက်ရှိမှာ ၁၈၁ ခု ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရုရှထက်ပင်များနေပါတယ် ။
၂၀၁၆ သြဂတ်လမှာ ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားသွားရတဲ့ Gaofen3ဂြိုလ်တုကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပြီး Gaofen 3. ဟာ ရေပြင်ပိုင်နက်ကိုစောင့်ကြည့်နေမှာပါ ။
electro-optical (EO), synthetic aperture radar (SAR) and electronic reconnaissance (ELINT) စတဲ့ မဆင့်မြင့်စနစ်တွေကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီးဖြစ်သည် ။
ဂြိုလ်တုတွေရဲ့အားနည်းချက်မှာ ခြေရာခံနေစဉ်အတွင်း ရာသီဥတုဆိုးရွားလာတဲ့အခါ ပုံရိပ်ကြည်လင်မှုမရှိခြင်း ၊ ညမြင်ကွင်းများနှင့်ဖန်ရှင်ပိုင်းအားနည်းချက်များ ၊ ပုံရိပ်အရည်အသွေးများ စတာတွေရှိနေသော်လည်း ရွေ့လျားနေတဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုခြေရာခံနိုင်ဖို့ပါ ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်နေခဲ့ပါတယ် ။
A2/AD စနစ်အရ မိမိဒုံးပျံတွေကိုပဲ့ထိန်းလမ်းကြောင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဂြိုလ်တုတွေကိုလိုအပ်သည် ။
GPS (Global Positioning System) စနစ်ကိုကိုယ်ပိုင်နည်းပညာသစ်တစ်ရပ်နဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့သလို လက်ရှိမှာ Beidou စနစ်ဟာ ဂြိုလ်တု ၁၉ လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး PLA(တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်) သာမက ကျတော်တို့သုံးနေတဲ့ ဟွာဝေးဖုန်းတွေ ၊ ရှောင်မီဖုန်းတွေမှာပင် ထို Beidou application ဖြင့် တည်နေရာများကိုကြည့်နိုင်နေပြီဖြစ်သည် ။
တချို့ဖုန်းများတွင် စဝယ်ကတည်းက Beidou ဆိုပြီးပါတတ်သည် ။
Beidou ဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အရောက်မှာ ဂြိုလ်တု ၃၅ လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်တော့မှာဖြစ်သည် ။
A2/AD တွင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများကိုဖျက်ဆီးမည့် Carrier Killer လို့တင်စားကြတဲ့ DF-21D ဒုံးပျံများ
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်မည့် HQ-9 နှင့် S-300 ၊ S-400 စနစ်များ ဖြင့်ပါဝင်ထားသည် ။
(A2/AD ကာကွယ်ရေးစနစ်အရ ပုံကိုကြည့်ပါ)
ပထမအဆင့်တွင် ရေမိုင် ၅၄၀ မှ ၁၀၀၀အတွင်းမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့် DF-21D ASBM များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခုခံမည် ။
ဒုတိယအဆင့်တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် ပြန်လည်ခုခံမည် ။
အထက်ပါ ပထမအဆင့်နှင့်ဒုတိယအဆင့်အတွင်း တရုတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလျောင်နင်ပါဝင်နိုင်ခြေရှိပြီး နှစ်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုစတင်သည်နှင့် DF-21D များက အမေရိကန်ပစိဖိတ်ရေတပ် CVBG ကို တိုက်ခိုက်မည်လည်းဖြစ်သည် ။
တတိယအဆင့်တွင် မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် ၊ မြေပြင်မှမြေပြင်ပစ်ဒုံးများ ၊ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီးများနှင့် စစ်သင်္ဘောများ ၊ ကမ်းခြေကာကွယ်ရေးစနစ်များကခုခံတိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်သည် ။
တရုတ်၏ A2/AD သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရေးအစီအမံတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် ။
ရုရှရဲ့ A2/AD ပြီးလျှင် တရုတ်၏ A2/AD သည် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မည် ။
ကမ်ဘာ့ကာကှယျရေးကှနျယကျမှာ ထိပျဆုံးကိုတကျလာနတေဲ့ တရုတျရဲ့ A2/AD
အာရှ-ပစိဖိတျအရေးစောငျ့ကွညျ့သူတိုငျးရဲ့ပွောစမှတျတှငျလောကျတဲ့ အမရေိကနျကိုယျတိုငျကခကျခကျခဲခဲရငျဆိုငျရမယျ့ ခတျေမီကာကှယျရေးအစီအမံတဈခုဖွဈတဲ့ anti-access/area-denial (A2/AD) ပငျဖွဈသညျ ။
A2/AD ဆိုတာဟာ တရုတျရဲ့အခွစေိုကျစဈစခနျးတှကေို ရနျသူရဲ့ဝိုငျးပတျလာမှုတှကေနေ ထိနျးခြုပျမှုပွညျ့ဝစှာနဲ့ကှပျကဲပွီး တနျပွနျတိုကျခိုကျမယျ့စနဈဖွဈသညျ ။
ပထမဆငျ့မှာ ရနျသူ့တိုကျခိုကျမှုတှကေိုဟနျ့တားမယျ ဒုတိယအဆငျ့မှာ အမရေိကနျရှိပဈမှတျမြား သို့မဟုတျ ပစဖိတျအတှငျးရှိပဈမှတျမြားကို တနျပွနျခမြှေုနျးပဈမှာဖွဈသညျ ။
ထို့ပွငျ A2/AD စနဈကွီးနဲ့အတူ maritime နဲ့ ထိုငျဝမျတို့ကဲ့သို့နရောတှကေို အပွညျ့အဝထိနျးခြုပျထားနိုငျမညျလညျးဖွဈသညျ ။
တရုတျသညျ ထိုးစဈထကျ ခံစဈမဟာဗြူဟာကိုပုံဖျောလာနသေညျ ။
အကောငျးဆုံးခံစဈသညျ အကောငျးဆုံးထိုးစဈဖွဈသညျ ဆိုသညျ့ဝါဒကိုလကျကိုငျထားပွီး အခှငျ့သာတာနဲ့ Counter ပွနျလုပျနိုငျမညျ့ အခွအေနကေိုဖနျတီးထားသညျ ။
တရုတျ၏ A2/AD ကို ဖွတျကြျောနိုငျမညျ့ SEAD လုပျငနျးစဉျမှာပငျ တဈဖကျမှအဆုံးအရှုံးကွီးစှာနှငျ့ပွနျထှကျသှားရအောငျထိ အကွံကွီးသညျ ။
A2/AD တှငျ intelligence , surveillance and reconnaissance (ISR) ဆိုပွီးနကျဝေါ့ချတဈခုတညျဆောကျထားသညျ ။
ISR တှငျ Targeting , Communications, Naval ,
Air , Missile defense, Cyber attack စသညျ့အပိုငျးမြားထပျမံဖွညျ့စှကျထားသညျ ။
Tracking ပိုငျးနှငျ့ C4ISR ပိုငျးအတှကျ အာကာသကိုအခွခေံပွီး ရမေိုငျ ၈သိနျး၇သောငျးကြျောကို စောငျ့ကွညျ့နမေညျဖွဈသညျ ။
တဈဖကျရနျသူဟာ တရုတျစဈသငေ်ျဘာတှကေိုတိုကျခိုကျဖို့လုပျခဲ့မယျဆိုရငျ တရုတျကမျးခွအေတျောမြားမြားဟာ အရပျဖကျရယောဉျအမြားဆုံးကမျးခွတှေထေဲမှာအပါအဝငျဖွဈလို့ ပဈမှတျသတျမှတျနိုငျဖို့ခကျပါလိမျ့မယျ ။
တရုတျအနနေဲ့ ၎င်းငျးရဲ့အရပျဖကျသငေ်ျဘာတှကေိုစဈဘကျထောကျလှမျးရေးစနဈမြားတပျဆငျပေးသှားမယျလို့ကွညောဖူးပါတယျ ။
target locating data and fusion အတှကျ တရုတျကိုယျပိုငျဂွိုလျတုတှဆေီကနေ positioning, navigation and timing (PNT) စတာတှကေို အကူအညီယူမှာပါ ။
ဒီအတှကျ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈထိမှာ တရုတျဟာ ဂွိုလျတု ၁၀ ခုအထိလှတျတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
အခုလကျရှိမှာ ၁၈၁ ခု ပိုငျဆိုငျထားပွီး ရုရှထကျပငျမြားနပေါတယျ ။
၂၀၁၆ သွဂတျလမှာ ကမ်ဘာကစိတျဝငျစားသှားရတဲ့ Gaofen3ဂွိုလျတုကိုလှတျတငျခဲ့ပွီး Gaofen 3. ဟာ ရပွေငျပိုငျနကျကိုစောငျ့ကွညျ့နမှောပါ ။
electro-optical (EO), synthetic aperture radar (SAR) and electronic reconnaissance (ELINT) စတဲ့ မဆငျ့မွငျ့စနဈတှကေိုတပျဆငျပေးထားပွီးဖွဈသညျ ။
ဂွိုလျတုတှရေဲ့အားနညျးခကျြမှာ ခွရောခံနစေဉျအတှငျး ရာသီဥတုဆိုးရှားလာတဲ့အခါ ပုံရိပျကွညျလငျမှုမရှိခွငျး ၊ ညမွငျကှငျးမြားနှငျ့ဖနျရှငျပိုငျးအားနညျးခကျြမြား ၊ ပုံရိပျအရညျအသှေးမြား စတာတှရှေိနသေျောလညျး ရှလြေ့ားနတေဲ့ပဈမှတျတှကေိုခွရောခံနိုငျဖို့ပါ ပိုမိုအဆငျ့မွှငျ့တငျနခေဲ့ပါတယျ ။
A2/AD စနဈအရ မိမိဒုံးပြံတှကေိုပဲ့ထိနျးလမျးကွောငျးပေးနိုငျဖို့အတှကျ ဂွိုလျတုတှကေိုလိုအပျသညျ ။
GPS (Global Positioning System) စနဈကိုကိုယျပိုငျနညျးပညာသဈတဈရပျနဲ့ဖျောထုတျခဲ့သလို လကျရှိမှာ Beidou စနဈဟာ ဂွိုလျတု ၁၉ လုံးနဲ့ခြိတျဆကျပွီး PLA(တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျော) သာမက ကတြျောတို့သုံးနတေဲ့ ဟှာဝေးဖုနျးတှေ ၊ ရှောငျမီဖုနျးတှမှောပငျ ထို Beidou application ဖွငျ့ တညျနရောမြားကိုကွညျ့နိုငျနပွေီဖွဈသညျ ။
တခြို့ဖုနျးမြားတှငျ စဝယျကတညျးက Beidou ဆိုပွီးပါတတျသညျ ။
Beidou ဟာ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအရောကျမှာ ဂွိုလျတု ၃၅ လုံးနဲ့ခြိတျဆကျပွီးဖွဈနမှောဖွဈလို့ တဈကမ်ဘာလုံးကို လှမျးခွုံနိုငျတော့မှာဖွဈသညျ ။
A2/AD တှငျ လယောဉျတငျသငေ်ျဘာမြားကိုဖကျြဆီးမညျ့ Carrier Killer လို့တငျစားကွတဲ့ DF-21D ဒုံးပြံမြား
လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုကိုကာကှယျမညျ့ HQ-9 နှငျ့ S-300 ၊ S-400 စနဈမြား ဖွငျ့ပါဝငျထားသညျ ။
(A2/AD ကာကှယျရေးစနဈအရ ပုံကိုကွညျ့ပါ)
ပထမအဆငျ့တှငျ ရမေိုငျ ၅၄၀ မှ ၁၀၀၀အတှငျးမှာ ရငေုပျသငေ်ျဘာမြားနှငျ့ DF-21D ASBM မြားဖွငျ့တိုကျခိုကျခုခံမညျ ။
ဒုတိယအဆငျ့တှငျ ရငေုပျသငေ်ျဘာမြားနှငျ့ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုမြားဖွငျ့ ပွနျလညျခုခံမညျ ။
အထကျပါ ပထမအဆငျ့နှငျ့ဒုတိယအဆငျ့အတှငျး တရုတျလယောဉျတငျသငေ်ျဘာလြောငျနငျပါဝငျနိုငျခွရှေိပွီး နှဈဖကျ တိုကျခိုကျမှုစတငျသညျနှငျ့ DF-21D မြားက အမရေိကနျပစိဖိတျရတေပျ CVBG ကို တိုကျခိုကျမညျလညျးဖွဈသညျ ။
တတိယအဆငျ့တှငျ မွပွေငျမှဝဟေငျပဈ ၊ မွပွေငျမှမွပွေငျပဈဒုံးမြား ၊ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုကွီးမြားနှငျ့ စဈသငေ်ျဘာမြား ၊ ကမျးခွကောကှယျရေးစနဈမြားကခုခံတိုကျခိုကျမညျဖွဈသညျ ။
တရုတျ၏ A2/AD သညျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကာကှယျရေးအစီအမံတဈခုပငျဖွဈသညျ ။
ရုရှရဲ့ A2/AD ပွီးလြှငျ တရုတျ၏ A2/AD သညျ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးဖွဈလာလိမျ့မညျ ။
ကုလသမဂ္ဂ က မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ဘာကြောင့် အနီရောင် အဆင့် သတ်မှတ် သ လဲ R2P နှင့် မြန် မာနိုင်ငံ
R2P နဲ့ UN တပ်ေ တွ ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရှ် မှာ တပ်​စွဲထား​ပေမယ့်​ အပြုံးမပျက်​ပဲ မိမိတပ်​ ကို ထိန်းကြောင်း​နေ တာ ကို သတ္တိ လို့ေ ခ်ါတယ်